Ivenkile yokucheba iinwele yobuso ethengisa ivenkile ethengisa ngexabiso eliphantsi kunye nokuthengiswa kwayo Enimei
Ukucheba iinwele ebusweni
I-4 ngo-1 yokususa iinwele: Isilungisi sempumlo & isichebe somzimba kunye nesitshixo sobuso kunye nokusika ishiya ukuhlangabezana neemfuno zakho zokususa iinwele ezahlukeneyo, ukhetho olufanelekileyo lokususa iinwele zomzimba ngokusika okungenabuhlungu.
Ukhuselekile kwaye awunabuhlungu: Esi sinwele sokucoca sisebenzisa ngokuchaneka okuphezulu kweebhloko zensimbi ezingenasinxibo, singonzakalisi ulusu lwakho. Ayitsali iinwele kulusu kodwa isondela kwingcambu yeenwele.
Kulula ukuyisebenzisa & ucocekile: Iintloko ezahlukileyo ezinokubuyiselwa zenza kube lula ukunciphisa iinwele ezingafunekiyo ngokuchanekileyo. Inqanaba layo lokungena manzi yi-IPX6 kwaye ikuvumela ukuba uhlambe iintloko zokusika phantsi kwamanzi abalekayo.
I-USB etshajekayo ephathekayo: Esi sisilinganisi esincinci esingenantambo esinebhanki yamandla, itshaja ye-USB, ilaptop okanye naziphi na izixhobo zokutshaja, osimahla ongazisebenzisa nanini na naphi na. Ungaze ube nexhala lokufumana iintloni ngokuziswa kukuyeka ukusebenza.
1. Yiba ne-carefrul ngelixa uqala ukuyisebenzisa ukuchukumisa ulusu.
2. Susa isiciko, uqinisekise ukuba akukho blade okanye monakalo.
3. Ukuba imveliso yakho iyasilela ukusebenza okanye ilizwi lemoto livakala ngokufana xa uyilayite "ON", nceda uphinde ubize kwakhona.
4. Beka izixhobo kulusu, uzishukumise ngobunono kwifom.
5. Cima umbane ugubungele ikepusi yokukhusela.
6. Ukutshaja iingcebiso: xa yayihlawuliswa, ukukhanya kuya kuba bomvu, emva kokutshaja ngokupheleleyo, ukukhanya kuya kuyeka, kuya kucima.
- Mini ephathekayo Lipstick imilo yokususa iinwele ebusweni
-Ukususa iinwele okungenasiphelo, indlela ye-hypoallergenic yokususa iinwele zobuso nezomzimba ezingafunekiyo
-Ungangeni manzi, IPX6
- Ifanele abasetyhini
1. Inokuyilungiselela phi?
I-blade enye inika umzimba ogudileyo: Sika amashiya / Ngaba / Imilenze / Impumlo iinwele / Imilebe
2. Ukuchetywa kwesine kwisinye, ukukhathalela ulusu
Ukuhlamba umzimba ngokupheleleyo / ujongano lwe-USB 1 ukutsheva ngokukhawuleza
3. 3D umnatha edada imela
Uyilo lwentloko yokusika lukwenza uzive ukhululekile ekusebenziseni
4. Cima amashiya akho ngokulula ngaphandle
ixhala malunga nokwenzakalisa ulusu lwakho
6. Ukuqhaqha intloko yokusika, kulula ukuyitshintsha
Iintloko ezahlukeneyo zokucheba ukuze zitshintshwe ngokukhawuleza
7. I-shaver enye inokufezekisa iinjongo ezine
Iintloko ze-cutter ezine (ixesha leshiya ngexesha lokutshiswa kwe-timminghnose tiingshaven)
8. Unokucheba iinwele kuwo onke amalungu e
Umzimba womntu unenwele ezirhabaxa nezinwele
ngaphandle kokushiya iingcambu
9. Thintela iinwele zempumlo ukuba zingakhuli ngaphandle
abesilisa nabasetyhini banokusebenzisa
10. Umzimba olungelelanisiweyo, odibeneyo kunye ophathekayo
Ungayifaka kwingxowa yakho yezithambiso kwaye uyisebenzise xa usiya
Amava athuthuzelayo, makhe uwubeke phantsi
11. Ukuhlamba umzimba ngokupheleleyo
Ingasetyenziselwa eyomileyo okanye emanzi
Ukutshaja ngokulula kwe-USB
Ukutshaja Kulula kakhulu
ungabiza naphi na
12. 3D intloko yokutsheva edadayo
Ukudada ngasekhohlo nasekunene, ukuqina okuqinileyo kulusu / Indawo yeBikini / Ubuso / Imilebe / Ikhwapha / Ngaba / Imilenze
Egqithileyo Zitshajwe eziphathekayo eziphathekayo Umbane oMbane ongenasiphelo oPhunga lweeNwele
Okulandelayo: I-Silicone Shower Brush engenaManzi nge-Handle ende
Indlebe kunye neempumlo zokucheba iinwele
Indlebe yokuPhungula iinwele
Isixhobo sokucheba iinwele zombane
Amadoda acoca iinwele
Ukucheba kweenwele zomntu
Ukucheba kweenwele zamadoda
Impumlo yokucheba iinwele
Impumlo yokucheba iinwele emadodeni
Impumlo yokucheba iinwele zitshajwe kwakhona
Impumlo yeNwele yokuCoca Amadoda anokutsha kwakhona
Ukuphathwa kweenwele okuPhathwayo kwaMadoda
Abafazi boMzimba wokuSusa iiNwele
Zitshajwe eziphathekayo eziphathekayo Manual Electric Stainless ...
Umgangatho we-4, iSakhiwo se-3, iPengtengda Industrial Park, i-131, i-Huating Road, i-Dalang, i-Longhua Zone, i-Shenzhen, i-Guangdong, i-China
© Copyright - 2014-2021: Onke amalungelo agciniwe.